Trump ayaa la sheegay inuu raadinayo waddo uu cafis ugu fidiyo caruurtiisa iyo lataliyihiisa… – Hagaag.com
Trump ayaa la sheegay inuu raadinayo waddo uu cafis ugu fidiyo caruurtiisa iyo lataliyihiisa…
Posted on 2 Diseembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Wargeyska The New York Times ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Donald Trump uu raadinayo inuu cafis madaxweyne u fidiyo 3 ka mid ah caruurtiisa, marka lagu daro wiilka uu sodoga u yahay isla markaana lataliyihiisa ah Jared Kushner, iyo sidoo kale qareenkiisa gaarka ah, Rudy Giuliani.
Sidoo kale shabakada NBC ayaa soo warisay in Trump uu ka fiirsanayo inuu ka baaqdo caleemo saarka madaxweynaha la doortay Joe Biden. Tani waxay imaaneysaa xili wakaalada wararka ee Associated Press ay kasoo xigatay xoghayaha cadaalada William Barr in wasaarada cadaalada aysan ogaanin jiritaanka khiyaano baahsan oo wax ka badali karta natiijada doorashada.
The New York Times ayaa sheegtay in Trump uu kala hadlay kaaliyeyaashiisa suurtagalnimada in la siiyo cafis madaxweyne caruurtiisa: Eric, Don Jr. iyo Ivanka, iyo sidoo kale Kushner iyo Giuliani.
Wargeysku wuxuu intaas ku daray – isagoo soo xiganaya ilo rasmi ah – in Trump uu kala hadlay arrinta Giuliani usbuucii la soo dhaafay, wuxuuna u sheegay kaaliyeyaashiisa inuu ka baqayo in maamulka Biden ay bartilmaameedsadaan isaga iyo kuwa ku dhow dhow si sharci ah ka dib marka uu ka tago Aqalka Cad, maadaama arrimahan ay noqon doonaan cafis hordhac ah, maadaama laga soo saaray dad aan dambiyo lagu helin oo weli wax dacwad ah lagu soo oogin.
Dhanka kale, NBC waxay soo warisay 3 ilo wareed oo sheegaya in madaxweyne Trump uu daraaseynayo suurtagalnimada inuu ku dhawaaqo inuu yahay musharax u taagan doorashada 2024 maalinta caleema saarka Biden, isla markaana uusan damacsaneyn inuu la xiriiro madaxweynaha la doortay ama ku casuumo inuu booqdo Aqalka Cad.
Ma jiro khiyaano baahsan
Dhanka kale, Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka – oo ku caanbaxay u dhowaanshaha Trump – ayaa u sharaxay wakaalada wararka ee Associated Press in Waaxaha Amniga gudaha iyo Cadaalada ay dabagal ku sameeyeen eedeymaha ku saabsan in horey loo sii diyaariyey aaladaha codeynta si looga been abuurto natiijada, laakiin ma aysan helin wax cadeyn kara “ilaa maanta.”
Barr wuxuu intaas ku daray in qareenada iyo wakiilada FBI-da ay dabagal ku hayeen cabashooyinka iyo macluumaadka ay heleen, laakiin aysan helin cadeyn wax ka badali karta natiijada doorashadii dhacday seddexdii bishii November ee la soo dhaafay.
Xoghayaha Cadaaladda ayaa ku amray xeer-ilaaliyeyaasha federaalka in ay bilaabaan baaritaanno ku aaddan eedeymo musuqmaasuq, wuxuuna ka dalbaday in ay ka fogaadaan baaritaannada lagu hayo “sheegashooyinka been abuurka ah ama buun-buuninta ah.”
Barr ayaa lagu arkay duhurkii Talaadada Aqalka Cad, waxaana jiray hadal heyn badan oo ku saabsan in laga qaado jagada.